Florentino Pérez oo go’aan cad ka qaatay mustaqbalka Gareth Bale ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Florentino Pérez oo go’aan cad ka qaatay mustaqbalka Gareth Bale ee kooxda Real Madrid
(Madrid) 18 Agoosto 2019.TWargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Gareth Bale uu sii joogi doono Real Madrid, kaddib markii uu garab istaag xoogan uu ka helay madaxweynaha kooxda Florentino Pérez.
Xiddiga reer Weles ee Gareth Bale ayaa wuxuu bandhig fiican ka sameeyay kulankii ay fiidnimadii xalay ay la ciyaareen kooxda Celta Vigo, waana sababta ka dambeysa uu u doonayo Florentino Pérez in Bale uu sii joogo garoonka Santiago Bernabéu.
Real Madrid ayaa guul kaga daah furatay olalaheeda horyaalka La Liga ee xili ciyaaredka cusub 2019/2020, kaddib markii ay 3-1 kaga soo adkaadeen Kooxda Celta Vigo kulankii ay kula soo ciyaareen garoonka Balaídos, wuxuuna Gareth Bale kulankan ka qabtay shaqo fiican, isagoo caawiyay goolka koowaad ay dhalisay Los Blancos.
Wargayska ayaa tilmaamay in Gareth Bale uu ahaa xiddig ku jira kursiga keydka kooxda Real Madrid kulamadii ugu dambeeyay ee xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, isla markaana ma uusan ciyaarin xitaa kulamadii ay ugu diyaar garoobayeen xili ciyaareedka cusub, laakiin wuxuu ku soo bilaawday ciyaartii xalay, isagoo door muhiim ah ka ciyaaray guushii ay ka gaareen Celta Vigo.
Yeelkadeeda, Gareth Bale ayaa u baahan inuu sii joogo kooxda Real Madrid isla markaana uu ciyaaro, laacibka reer Weles ayaana xiiseenayaa inuu si adag u shaqeeyo, isla markaana uu soo bandhigo qaab ciyaareedka laga doonayo xili ciyaareedka oo dhan ee maahan kulan ama laba kulan.
Klopp oo si xoogan u difaacay goolhaaye Adrián, kaddib qaladkii foosha xumaa uu ku hor sameeyay Southampton
“Gareth Bale wuxuu sabab u ahaa in Real Madrid ay ku guuleysato koobab badan” – Casemiro